आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी : कम्पनी विश्लेषण (सोमवार, २३ चैत २०७७)
आइतबार कम्पनीको शेयर मूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ९ दशमलव ९७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रु. १ हजार ३१३ पुगेको हो । यस दिन कम्पनीको शेयर २७ हजार ९२२ कित्ता शेयर खरिद बिक्री भएको छ ।
७ प्रतिशत बोनस शेयर वितरणपछि ४० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने प्रस्ताव गरेर साधारणसभामा प्रस्ताव लगेसँगै कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको हो । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी रु. १ अर्ब ८ करोड १८ लाख रहेको छ । ७ प्रतिशत बोनस शेयर वितरणपछि पुँजी रु. १ अर्ब १५ करोड ७५ लाख ६४ हजार पुग्नेछ । कम्पनीले सोही पुँजीको ४० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्नेछ ।
कम्पनीको ६१ दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिनमा सेतो मारुबोजू बनेको छ । यस्तो आकृतिले बजारमा कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दो प्रवृत्तिमा रहेको संकेत गर्छ ।
आरएसआई ओभरबौज्ट जोन ७६ दशमलव ९० बिन्दुमा छ । यसले शेयर खरिद चाप उच्च रहेको देखाउँछ । कम्पनीको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ७६ दशमलव ४६ बिन्दुमा छ । उतारचढाव सामान्य रहेको देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा जोखिम मध्यम हुन्छ भने प्रतिफल पनि मध्यम हुने गर्दछ ।
आइतबारको शेयर मूल्य रु. १ हजार ३१३ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य सस्तिए रु. १ हजार १९४ मा टेवा पाउने देखिन्छ । कम्पनीको यस दिनको शेयर मूल्य ६१ दिनयताकै उच्च कायम भएको हो ।